Sushi-ka uu iibiyay Harris Teeter wuxuu kuxiranyahay in kabadan 150 cudur
Saraakiisha Isbahaysiga Caafimaadka ee Cabarrus (CHA) iyo silsiladda cuntada ee Harris Harris ayaa baaraya in ka badan 150 warbixinno oo la xiriira cudurro la xiriira sushi AFC oo laga soo iibsaday laba goobood oo tafaariiq ah oo ku taal Waqooyiga Carolina. Kuwa aan fiicnayn waxay la kulmayaan calaamado matag, shuban, qandho, murqo xanuun ...
Saameynta howlaha ganacsiga iyo isbedelada shirkada ay keeneyso tikniyoolajiyadda suuqa cunnada ee 2021 - IFF, Givaudan, Symrise, Robertet, HuaBbao, Firmenich, Tate & Lyle, JK S ...
Warbixinta Suuqa Wakiilada Cunnooyinka Cuntada ee 2020 waxaa kujira isugeyn dhammaystiran oo isbeddello qiimeyn ah iyo falanqeyn saadaalin ah. Falanqeyntan dhadhanka cunnada waxay qaab u siisaa macaamiil aad u tiro badan. Si loogu guuleysto loona helo cilmi baaris caalami ah oo adduunka laga aqoonsan yahay suuqa dhadhanka cunnada ...
Ku takhasusay cuntada sushi iyo alaab-qeybiyeyaasha la xiriira cuntada sushi
Jinan Laiwu Feifan ganacsiga caalamiga co., LTD. Ma yahay xirfadle wax soo saare u leh cunnooyinka sushi iyo alaabada la xiriirta cuntooyinka sushi, waxaan ku jirnay ganacsiga cuntada sushi in ka badan 10 sano, alaabteenna oo daboolaysa khudradda la shiilay (sinjibiil sushi la dhanaaday, digaag la shiiday, Kanpyo xilliyo leh, la dubay cu ...